Aurora Borealis: meelaha ugu fiican meeraha si aad u aragto | Saadaasha Shabakadda
Nalalka Waqooyiga waa ifafaale cajiib ah, hubaal waxa ugu quruxda badan ee bini aadamku arki karo kuna raaxaysan karo. Midabada cajiibka ah ee ka ifaya cirka habeenka ayaa u noqon kara ilaha dhiirrigelinta qorayaasha iyo farshaxanada.
Haddii aadan rabin inaad seegto sidoo kale, raadi waxay yihiin meelaha ugu fiican meeraha si looga ilaaliyo Nalalka Waqooyiga.
1 Sidee loo soo saaraa Nalalka Waqooyiga
2 Macnaha »aurora borealis»
3 Bilaha ugufiican ee lagu arko Nalalka Waqooyiga
4 Meelaha lagu arko Nalalka Waqooyiga
Sidee loo soo saaraa Nalalka Waqooyiga
Kahor intaanan ogaan meesha aan aado si aan u arko, Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo sida horay loogu soo saaray? Sidan oo kale, waxaan ku arki karnaa xitaa indho wanaagsan. Marka aan bilowno.
Sidaan ognahay, qorraxdu waxay si isdaba joog ah u siideysaa falaadhaha qoraxda dhan walba, qaarna waxay gaaraan meeraha Dunida. Marka falaadhani ay taabtaan ulaha, woqooyi iyo koonfurba, ee ku yaal magnetosphere-ka dhulka, a iftiin faafay laakiin inta badan waxay ku soo jeedaan ionosphere.
Si aad u noqotid mid gaar ah, had iyo jeerna sida ku cad aragtida illaa hadda la aqbali karo, auroras waxaa sababa a shucaaca walxaha ka imanaya boqorka xiddigta. Elektaroonka iyo borotoonada ka yimaada labadaba waxaa leexiyay dhul-gariirka birlabta. Haddii walxaha ay u socdaan jihada saxda ah, birlabta birlabta ayaa mas'uul ka noqon doonta inay isugu soo uruuriso mid kasta oo ka mid ah tiirarka birlabta, sidaasna ay ku gasho isku dhaca qaybaha hawada ee, ugu dambeyntii, iftiin bay soo saari doonaan.
Macnaha »aurora borealis»
Haddii bandhigu laftiisu cajiib yahay, macnaha magaciisu isna sidaas ugama dambeeyo sidoo kale. Oo waxaa soo baxday in "Aurora" ay tahay magaca ilaahadda Roomaanka ee waaberiga, iyo "boreal" -boreas- waa eray asal ahaan ka soo jeeda Griig oo macnaheedu yahay woqooyi. Marka, waxaan haynaa taas »Aurora Borealis» oo loola jeedo Waaberi Waqooyiga (ama Nalalka Waqooyiga). Fiicnaanteeda miyaanay ahayn?
Bilaha ugufiican ee lagu arko Nalalka Waqooyiga
In kasta oo ifafaaladani ay dhici karto sanadka oo dhan, bilaha ugu fiican ayaa ah Janaayo iyo Febraayo, oo ah marka heer kulku hooseeyo. Dabcan, waa inaad ahaataa mid aad diirran si aad ugu raaxaysato.
Wali, laga bilaabo Oktoobar ilaa Maarso waxay u dhacaan si isdaba joog ah, sidaa darteed haddii aadan tagi karin labadaas bilood, waxaad had iyo jeer tagi kartaa mid ka mid ah afarta kale.
Meelaha lagu arko Nalalka Waqooyiga
Hadda oo aan ognahay sida loo soo saaro iyo maxay yihiin bilaha ugu wanaagsan, aan aragno, hadda, halka ay tahay inaan aadno haddii aan dooneyno inaan ku raaxeysano habeenka ugu quruxda badan nolosheena.
Alaska, nalalka waqooyiga waxaa laga arki karaa buuraha bilaha Nofeembar iyo Janaayo, markay ku jiraan bartamaha xilliga qaboobaha. Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad tagto, waa inaad ogaataa taaswaxayna sameeyaan safarro jiilaal kuwaas oo raadinaya yaababkan.
Inta lagu jiro bilaha jiilaalka, cirka Kanada waxaa ku daboolan nal shaki ayaa kaa gelin doonta haddii aad riyooto ama soo jeedo. Marka ugu horeysa waxaad arki doontaa wax kasta oo mugdi ah, laakiin ugu dhakhsaha badan sawirro iyo nalalka qoob-ka-ciyaarka ayaa soo muuqan doona oo ka muuqan doona marinnada biyaha ee aagga.
Haddii marka lagu daro inaad jeceshahay ifafaalaha iftiinka aad jeceshahay sawir qaadista, u aad Greenland bilaha jiilaalka iyo ku raaxayso fasal master leh sawir qaade xirfad leh taasi ayaa ku bari doonta inaad hesho sawirada ugu fiican habeenkii.
Nalalka Waqooyiga ayaa ka muuqda Iceland inta udhaxeysa august iyo bartamaha Abriil, taas oo ah marka heer-kulku hooseeyo oo habeennadu ay ugu mugdi yihiin. Hubso in kamaraddaadu ay diyaar noqonayso 22ka fiidnimo, maadaama ay tahay goorta ay u badan tahay inay dhacdo.
Noorway way maqnaan kari wayday. Shaki la'aan, meesha ugufiican waa Cirifka Arctic, markaa si aad u aragto, woqooyiga aad usocoto, waxbadan ayaad ku raaxeysan kartaa Nalalka Waqooyiga. Marka laga hadlayo Norway, waa inaad tagtaa inta udhaxeysa Sebtember 21 ilaa 21-ka Maarso, taas oo noqon doonta markii aad sidoo kale tagi karto barafka ama mootada barafka.
Qeybtaan adduunka ka mid ah waxaa la sheegaa in nalalka woqooyi ay ka muuqdaan muuqaal aan ka badneyn ama ka yar 200 habeen sanadkii, bilaha ugufiican waa inta udhaxeysa Sebtember ilaa Maarso.
Dhanka kale, aad u feejignow maxaa yeelay khubarada ayaa ka digaya inay sii socon karaan saacado ... ama ilbiriqsiyo.
Siberia si aad u aragto bandhig noocaas ah, waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u qabow, iyo sidoo kale heerkulka qaboobaha ayaa si fudud hoos ugu dhici kara -30ºC. Laakiin waxaa habboon inaad xirto dhowr lakab oo diirimaad si aad u aragto.
Si aan uga dhigno habeenka runtii lama iloobi karo, ma ilaabi karno waxyaabaha soo socda:
Xidho dhar diirran (oo ay ku jiraan galoofyada, masar iyo koofiyad)
Kaamirada diyaari sawiro iyo / ama video
Dabcan raadi a goobta aan lahayn wasakhda iftiinka
In kasta oo aad kaligaa safri karto dhibaato la'aan, waxaan kugula talinayaa inaad raacdo qof aad jeceshahay. In sidan, waayo-aragnimadu waxay noqon doontaa xitaa faa'iido badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Meelaha ugufiican meeraha ee laga ilaaliyo Nalalka Waqooyiga
Awooda cajiibka ah ee El Niño '' Godzilla ''
8 meelood oo aanu roobku ka joogsanayn daadinta